Xeeladaha YouTube ee Muhiimka u ah Guusha Kanaalka - YTpals
Xeeladaha YouTube ee Muhiimka u ah Guusha Kanaalka
Tan iyo markii la bilaabay 2005-tii, YouTube waxa ay noqotay dhex-dhexaadinta fiidyaha ee loogu isticmaalka badan yahay intarneedka. Laga bilaabo 2020, waxaa jira hareeraha BillionX bilyan oo qof dunida oo dhan iyadoo la isticmaalayo YouTube. Waxa ku bilaabmay kayd online ah oo loogu talagalay fiidyowyada hiwaayadda ah ayaa noqday goob dadka siin karta korriinka dabiiciga ah sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Haddii aad diyaar u tahay inaad bixiso dadaalka loo baahan yahay oo aad isticmaasho istaraatijiyad wanaagsan, waxaad sidoo kale ka heli doontaa bandhig weyn oo ku saabsan goobta. Maqaalkani waxa uu sahamin doonaa qaar ka mid ah tabaha wanaagsan iyo xeeladaha YouTube kuwaas oo gelin doona kanaalkaaga waddada guusha.
1. Abuuritaanka waxyaabo dhabar-ku-taag ah
Khalad caam ah oo ku saabsan helitaanka guusha YouTube waa in abuurista waxyaabaha fayraska ah ay tahay habka keliya. Sida isticmaalayaashu u isticmaalaan fiidiyowyada ayaa isbeddelay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyo qaabka abuurista fiidiyowyada fayrasku had iyo jeer maaha xeeladda ugu fiican YouTube. Inkasta oo inta badan waxa ku jira lagu daawado talefannada gacanta, macnaheedu maaha in dadku ay raadinayaan muuqaallo gaagaaban oo keliya ujeeddooyin madadaalo ah. Maadaama aysan dadku qasab ku ahayn inay raadiyaan maaweelo markay socdaan, baaxadda nuxurka dhabarka caatada ah ayaa sii kordhaya. Mawduuca dhabarka u janjeedha waxa loola jeedaa fiidyowyo dhaadheer kuwaas oo noqon kara madadaalo, waxbarasho iyo wargelin.
Haddii aad rabto in kanaalkaagu noqdo mid guuleysta, qayb kale oo muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyada YouTube waa inay noqotaa mid joogto ah. Dhanka waa qayb weyn oo ka mid ah kordhinta dhibcaha fiidyaha ee algorithm YouTube. Way ku caawin lahayd haddii aad isku daydo inaad si joogto ah u dhejiso fiidiyowyada oo aad hubiso inaad la soo baxday muuqaal cusub labadii maalmoodba mar. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad ku habboonaato goobta. Waa inaad sidoo kale hubisaa joogtaynta marka la eego qaabka. Tan waxa lagu samayn karaa in lagu daro mawduuc soo noqnoqda ama la isticmaalo dad ama jilayaal isku mid ah. Daawadayaashaadu waxay ogaan doonaan waxa laga filayo kanaalkaaga iyagoo isticmaalaya xeeladan. Waqti ka dib, aqoonta ayaa isu beddeli doonta daacadnimo.
3. Ku dhiiri geli dhagaystayaashaada inay tallaabo qaadaan
Qofkasta oo leh kanaalka YouTube wuu ogyahay muhiimada ay leedahay ku dhiirigelinta daawadayaashaada inay soo dhigaan faallooyinka oo ay jeclaadaan fiidiyowyada. Istaraatiijiyadaada YouTube waa inay ahaato mid loogu talagalay in lagu dhiso dhagaystayaal isdhexgal leh halkii ay ka ahaan lahayd dhagaystayaal aan fiicneyn. Habka kale ee lagu dhiirigelinayo daawadayaashaada inay tallaabo qaadaan waa iyada oo loo marayo kaararka YouTube. Kaararka YouTube-ka waxay ku yimaadaan qaab ogeysiisyo horay loo sii qorsheeyay oo tilmaamaya daawadayaasha fiidyaha kale ee kanaalkaaga ama mareegahaaga. Taas ka sokow, shaashadaha dhamaadka waxa kale oo loo isticmaali karaa kor u qaadida waxyaabaha kale.
4. U wanaaji macluumaadkaaga raadinta YouTube
Si aad u hubiso guusha YouTube kanaalkaaga, waa inaad hubisaa in kanaalkaagu helayo soo bandhigida ugu badan. Iyadoo tayada nuxurka iyo joogtaynta ay ku saarayso wadada saxda ah, waxaa lagama maarmaan ah in la wanaajiyo nuxurka si loo kordhiyo darajada Raadinta YouTube. Waxaad tan ku samayn kartaa adiga oo isticmaalaya ereyada muhiimka ah ee cinwaanka, ka sokow samaynta sharraxaadyo wanaagsan iyo ku darista calaamadaha khuseeya.
5. Ka fikir daqiiqadaha-yar ee daawadayaasha
Dookhyada daawadayaasha waa inay ahaadaan kuwa hore iyo bartamaha marka la samaynayo xeelad YouTube. Haddii aad rabto inaad u gudbiso waxyaabaha khuseeya daawadayaasha, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso daqiiqadaha-yar ee daawadayaasha marka ay raadiyaan nuxurka. Tan waxa ku jira in la eego sababta dadka ku qasbaysa in ay mawduuc gaar ah ka raadiyaan goobta. Waxaad markaa dhexgeli kartaa habkan oo aad u gudbiso baahiyaha daawadayaasha adiga oo abuuraya nuxurka ay rabaan.
Hadafka ugu dambeeya ee istaraatiijiyadaada YouTube waa in ay ahaato dhisidda bulsho daawadayaal daacad ah goobta. Talooyinkan, waxaad dejin doontaa kanaalkaaga YouTube-ka waddada guusha. Waxaad ku kabi kartaa xeeladahan YouTube adoo isticmaalaya dhowr qalab oo kale oo qiimo leh oo laga heli karo YTpals. Waxaad awoodi kartaa iibso Saacadaha Daawashada YouTube, kaas oo kaa caawin kara bilaabida kanaalkaaga oo wanaajin kara Google iyo YouTube-kaaga raadinta. YTpals waxa ay bixisaa adeegyo kala duwan oo YouTube ah oo qaali ah kuwaas oo caawiya kobcinta kanaalada YouTube. Waxaan hubineynaa qanacsanaanta ugu badan ee macaamiisheena anagoo siinaya in keenista had iyo jeer ka badan tahay waxa la dalbado. Adeegyada YTpals sidoo kale waxay wataan 100% dammaanad qaadka sirnimada iyo badbaadada. Si aad wax badan uga ogaato adeegyadayada, nala soo xidhiidh maanta!
Xeeladaha YouTube ee Muhiimka u ah Guusha Kanaalka waxaa qoray YTpals Writers, 7 January 2022
Maxay yihiin B2B Brands inay ku Qabtaan YouTube Hadda?
2020 ma noqon karto mid ku habboon dhaqaalaha adduunka. Cadhada cudurka faafa ee COVID-19 ayaa laga dareemay adduunka oo dhan, gaar ahaan ganacsiyada, kuwaas oo ay ahayd inay hoos u dhigaan albaabadooda ka dib amarada joogitaanka guriga….
Isticmaalka Caqabadaha YouTube si aad u kordhiso daawadayaashaada iyo tirada macaamiishaada
Xusuusnow tartankii baaldi barafka iyo sida uu ugu faafay warbaahinta bulshada? Waa mid ka mid ah tusaalooyin badan oo muqaal tartan ku salaysan oo guulaystay kuwaas oo sameeyay mowjado sanadihii u dambeeyay. Fiidiyowyo tartan ah ayaa sidoo kale soo baxay sida…